26 Talooyin si aad u ilaaliso Dukaameysiga Raashinka ee Miisaaniyadda sanadka 2021
Bogga ugu weyn 26 Talooyin si aad u ilaaliso Dukaameysiga Raashinka ee Miisaaniyadda sanadka 2022
Mid ka mid ah siyaabaha aad ku ogaan karto dhaqaale ahaan waa adiga oo kharashyadaada hoos u dhiga oo aad awooddo. Had iyo jeer iibsashada waxyaabaha aadan u baahnayn waxay kaa tagaysaa inaad kharash garayso wax ka badan intii loo baahnaa.
Markaa waa kuwan talooyin dhowr ah oo kaa caawinaya inaad ka dhigto dukaamaysiga raashinkaaga miisaaniyad. Si taxaddar leh u akhri.
Talooyin Ku Saabsan Joogtaynta Dukaameysiga Raashinka ee Miisaaniyadda
1. Wax ku iibsashada calool madhan maaha fikrad wanaagsan. Sababta ugu weyn ayaa ah marka aad wax ka soo gadato calool madhan waxay kaa caawin doontaa inaad ka hortagto qiimaha qashinka qashinka si aad u demiso gaajada. Markaa waxa lagula talinayaa, ka hor inta aanad wax soo iibsan, raadso cunto fiican oo aad cunto.
2. Si taxaddar leh u samee liis wax kasta oo aad u baahan tahay oo ku dheg, gaar ahaan haddii carruurtaadu ay ku caawinayaan.
3. Kahor intaadan dukaamaysiga aadin, u qorshee cuntadaada toddobaadka kadibna iibso waxa ku jira liiska.
4. Keliya tag dukaanka toddobaadkiiba mar. Haddii ay suurtogal tahay, tag wax kasta oo aad u baahan tahay bil gudaheed hal mar. Haddii aad tagto dukaanka maalin kasta ama dhowr jeer toddobaadkii, waxaad u badan tahay inaad kharash garayso.
Read More: Sidee ayay tahay in biilkayga raashinka celcelis ahaan uu noqdo ka dib Faafida?
5. Had iyo jeer way fiican tahay inaad dukaamaysiga aado markaad tamar leedahay oo aadan ka daalin maalin dheer.
6. Soo celi dhalooyinkaaga iyo gasacadahaaga beddelkii dhigaalka.
7. Markaad daasho, walaacdo, ama degdegto, tag dukaamada aad ugu jeceshahay. Waxaad heli doontaa waxaad u baahan tahay oo aad si dhakhso leh ula bixi karto.
XIDHIIDHKA: Waa maxay Saqafka Deynta? Dulmar iyo sida ay u shaqeyso
8. Lacag ku keydi cuntada iyo raashinka adiga oo sii qorsheeya wax soo iibsiga. Samee liistada raashinka si ay kaaga caawiso inaad ku dhegto miisaaniyaddaada.
9. Qorshee cuntooyinkaaga si aad hadhaaga uga hesho qado maalinta ku xigta, ama waxaad ku kaydin kartaa qaboojiyaha qaboojiyaha si aad dhakhso ugu cuntid.
10. Samee cunto fudud, casiir, iyo dawooyin. Waxay kaa caawin doontaa inaad kharashyadaada hoos u dhigto.
11. Iska yaree ku tiirsanaanta cuntooyinka qasacadaysan iyo kuwa baakaysan adiga oo jeexaya salaarkaaga iyo farmaajadaada.
Akhri Sidoo kale: 21 Waxyaabood Oo La Sameeyo Marka Lagu Caajisto Shaqada | Iskuday Hadda!
12. Bishiiba mar, nadiifi qaboojiyahaaga iyo armaajooyinkaaga. Isticmaal waxaad haysato ka hor intaadan wax badan iibsan.
13. Habbee kabadhadaada iyo khaanadahaaga kaydinta cuntada. Tani waxay awood kuu siinaysaa inaad la socoto waxa iyo waxa aad haysatid ee aad ka tagtay. Haddii aadan garanayn waxaad haysato ama aadan heli karin waxaad soo iibsatay, waxaad ku dambayn doontaa inaad iibsato wax badan oo isku mid ah.
14. Markaad kaydinayso, isha ku hay timirta dhacaysa, si fiicanna ugu xidh cuntada si ay u noqoto mid cusub ilaa iyo inta suurtogalka ah.
15. Haddii aad soo iibsato hilib aad u tiro badan, hore u kari ama kari kari kadibna qabooji si aad u gaabin waqtiyada diyaarinta cuntada. Way yar tahay in la cuno haddii aad ogtahay inaad guriga ku haysato cunto.
16. Waqti ku bixi dhaqidda iyo/ama jarista miraha iyo khudaarta toddobaadkiiba mar. Tani waxay dardar gelin doontaa diyaarinta cashada iyo qadada iyada oo sidoo kale bixinaysa cunto fudud oo caafimaad leh oo diyaarsan.
17. Si taxadar leh u sax alaabta aad horay u soo iibsatay ee liiskaaga ku jira si aanad u samayn khalad aad ku iibsanayso wax ka badan intii loo baahnaa.
XIDHIIDHKA: Dib u eegista Nidaamka Amniga Guriga ADT 2022
18. Ha iibsan cunto fudud inta aad safarka ku jirto. Badanaa way caafimaad yar yihiin oo way ka kharash badan yihiin.
19. Ku tijaabi cuntooyinka cusub oo noqo hal -abuur. Waxaa laga yaabaa inaad heshid cunto ka raqiisan sida aad jeceshahay oo kale!
20. Ku dukaamee kalkuleetarka oo ku dar alaabta gaarigaaga markaad socoto. Haddii aad wax la iibsaneyso carruurta, u xil saar inay tiriyaan waxa ku jira gaariga. Waxay kaa caawin doontaa inaad ku dhegto miisaaniyaddaada.
Akhri Sidoo kale: Sida Loo Bilaabo Meherad Waqooyiga Carolina 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
21. Baro sida loo kariyo ama loo dubto. Weydii xubin qoyska ah kaalmo ama isku qor fasal. Waxay kaa caawin doontaa inaad hoos u dhigto qiimaha qaar ka mid ah kuwan.
22. Alaabta raashinka ee aan cuntada ahayn, sida saabuunta wax lagu dhaqo ama bacaha qashinka, waxaa laga iibsan karaa dukaanka raqiiska ah.
23. Kaliya soo iibso waxaad u baahan tahay oo aad awooddo; heshiiska 3-for-1 wuxuu mudan yahay oo kaliya haddii aad isticmaali karto dhammaan saddexda.
24. Qiimee oo ka dukaameyso si aad u hesho qiimo -dhimis shayada aad si joogto ah u iibsato. Markay suurtogal tahay, isticmaal rasiidhada dukaanka iyo soo -saaraha. Tixgeli soo dejinta mid ka mid ah kuwan barnaamijyada raashinka taleefankaaga casriga ah ama kiniiniga. Kuubannada iyo qiimo dhimistu waxay kaa caawin karaan inaad lacag ku kaydsato raashinka.
25. Maskaxda ku hay in cabbirrada yaryar ay mararka qaarkood lacag kuu badbaadin karaan. Ogow inta ay le'eg tahay waxyaabaha aad u baahan tahay si aadan u iibsan wax ka badan waxa aad runtii u baahan tahay.
26. Ha ka eryin summadaha bakhaarka ama magacyada aan magaca lahayn. Kuwo badan waxaa sameeya isla shirkado sida sumcadaha caanka ah, laakiin leh summad ka duwan.
Tilmaamahan, haddii si taxaddar leh loo raaco, waxay kaa caawin karaan inaad ka dhigto dukaamaysiga raashinka miisaaniyad. Waxaad hubsan kartaa inaadan khaldamin markaad si taxaddar leh u raacdo talada tan lagu siiyey.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad haysatid tilmaamo kale oo adiga ku shaqeynaya oo aan halkan lagu qaban, si fiican ayaad noogu wadaagi kartaa qaybta faallooyinka.
Software -ka Canshuurta ee ugu Fiican 2022
15 Best Software Mining Bitcoin In 2022
Immisa Galan oo Biyo ah ayuu Miisaamaa?
Waxaa jira sababo kala duwan oo laga yaabo in uu qof u danaysto inta ay le'eg tahay miisaanka biyaha. Waxaa laga yaabaa inaad…